Buhari leghaara Onye isi ndị agha na ndị dike ndị ọzọ dara ‘Buharị Buhari leghaara Onye isi ndị agha na ndị dike ndị ọzọ ada’
News Nwere ike 22, 2021
Onyeisiala Muhammadu Buhari agaghị emume olili ozu nke Onye isi ndị agha (COAS) dara ada, Lieutenant-General Ibrahim Attahiru, na ndị isi ndị isi ndị agha isii ndị ọzọ nwụrụ na ihe mberede ụgbọelu na Kaduna na Fraịdee.
Emere ememe olili ozu na Satọdee na National Mosque na National Christian Center dị na Abuja, dịka onye na-ekwuchitere ndị agha Mohammed Yerima kwuru na mbụ.
E mechara tinye ozu ndị isi ahụ nwụrụ anwụ na ebe a na-eli ozu ndị agha na mba, nke dị naanị kilomita ole na ole site na ebe obibi gọọmentị nke Buhari, bụ State House.
Ka o sina dị, mịnịsta ala na-ahụ maka nchekwa gosipụtara ihe omume ahụ site n'aka onye na-ahụ maka nchekwa ya bụ Bashir Magashi, onye nọrọ naanị ya na Villa Villa.
Bashir Magashi, Major General lara ezumike nká, bụ Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa.
Ọtụtụ ndị Naijiria, n'aka nke ọzọ, anọgidewo na-akatọ Mr Buhari maka ịhapụ ememe olili nke otu n'ime ndị isi ọrụ ya nwụrụ mgbe ọ na-eje ozi na mba ahụ.
Reno Omokri, onye na-akatọ ogologo oge na onye bụbu onye enyemaka onye isi ala, katọrọ ọdịda nke onye isi ala ịpụ na COAS olili na tweet.
“Ọ bụ ihe nwute na President Muhammadu Buhari anọghị na olili nke Chief Chief of Army Staff, (Lieutenant) General Attahiru. Onye jere ozi ya bụ Minista na-ahụ maka nchekwa (Maj. Gen. Bashir Magashi (retd.)).
“Egburu Attahiru ka ọ na-eje ozi na Naịjirịa. Buhari, onye nọrọ ụbọchị anọ na Paris enweghị ike ịga olili ozu Attahiru ruo nkeji iri atọ, ”Mazị Omokri dere na Twitter.
Mazị Buhari si njem njem ụbọchị anọ laghachi France na Tọzdee, akwụkwọ akụkọ ndị mmadụ na-akọ.
N'otu aka ahụ, Mazị Buhari kpalitere esemokwu na Disemba mgbe ọ na-agaghị eleta Kankara mgbe nwatọrọ ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 300 mgbe ọ nọ ezumike n'ụlọ ya na Katsina.
Kama nke ahụ, o zipụrụ ndị nnọchianya nke onye ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara nchekwa mba bụ Babagana Monguno ka ọ ga-efe site na Abuja ruo Katsina.
Mazị Attahiru na ndị ọrụ agha iri ndị ọzọ nwụrụ na Fraịdee mgbe ụgbọ elu Beechcraft 350 daara ụzọ ụgbọelu dị n’Ọdụ Kadunagbọelu Kaduna.
Ejiri COAS lie n'ehihie Satọdee n'ili ozu ndị agha na Abuja dị ka usoro Islam si dị. Ndị gọvanọ, ndị omeiwu, ndị otu nnochite anya ndị nnọchi anya obodo na ndị ọzọ amaara aha ha si n’obodo niile wee gaa kwanyere COAS ugwu ikpeazụ.
Onye isi ndị ọchịagha nwụrụ anwụ na ndị ọzọ ga-eli taa na Abuja Nwere ike 22, 2021
Attahiru: Omokri zara Buhari na Osinbajo ịghaghị olili nke COAS na ndị isi ndị agha ndị ọzọ Nwere ike 22, 2021
'Hchụ nta maka ndị ọrụ ESN na South East ka ndị ohi na-achụpụ obodo ndị dị na mgbago ugwu,' ka onye bụbu onye kwuru okwu ECOWAS na-ekwu. Nwere ike 4, 2021
Buhari họpụtara onye ikwu ha bụ Salisu Garba dị ka onye ọka ikpe FCT, Senate iji kwado nhọpụta April 20, 2021
Lọ omebe iwu sineti arịọla onye isi CCT ka ọ gbachitere onwe ya maka ebubo mpụ Nwere ike 4, 2021
Ndi Naijiria, dika onye isi ochichi obodo ahu si di, ha kpatara 60% nke mpụ na Ghana Town. April 24, 2021
Tags:babagana monguno, kaduna ọdụ ụgbọ elu mba, reno omokri, ndị isi ọrụ